ကွန်ပျူတာများ | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ညွှန်ကြားချက်နှင့်အကြံပြုချက်များ: Chrome ကိုရှာရန်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
အင်တာနက်ကိုယခုအများအပြားခြိမ်းခြောက်မှုများ၏ခေတ်သစ်ကွန်ပျူတာစနစ်များသည်အသုံးပြုသူများရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလူတိုင်းသိပါတယ်။ အဲဒီမှာကနေ virus နဲ့ worm, keylogger နှင့်ကြော်ငြာရှင်များ, သူလျှို, ပင် browser ကိုပြန်ပေးသမားများထံသို့လာကြ၏။ ဤအရာတစျခုမှာ ...
အကောင်းတစ်ဦးဘတ်ဂျက် Gaming Laptop ကိုရှေးခယျြ, ဒါပေမယ့်အစွမ်းထက်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? ကျွမ်းကျင်သူပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ
စျေးသိပ်မကြီးတဲ့ Gaming Laptop ကို - နောက်တဖန်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းစိတ်ဝင်စားသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကျိုးအတွက်စာရေးအတွက်သင်များ၏ရှေ့မှောက်၌သောအရှိဆုံးဆုံးပြောပြလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မရှိရှင်းလင်းစွာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့သတ်မှတ်ထားသောနယ်နိမိတ်ရှိပါတယ်တဲ့အယူအဆ ...
ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးသည်ရှုပ်ထွေးသည့်ပြissueနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြီးတော့သုံးစွဲသူနည်းနည်းကဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသူတို့ရဲ့ operating system ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ထိထိရောက်ရောက်ပေးနိုင်တယ်။ များသောအားဖြင့်ကွန်ပျူတာသည်ဗိုင်းရပ်စ်များကူးစက်ခံရသည့်အခြေအနေများပေါ်ပေါက်လာသည်။
AMD ၏ A8-6410 Processor ကို: features နဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
AMD A8-6410 သည် quad-core ပရိုဆက်ဆာဖြစ်ပြီးဘတ်ဂျက် laptop များအတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒီကိရိယာအတွက်ကုဒ်နံပါတ်က Beema ပါ။ AMD A8-6410 CPU ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များတွင်အောက်ပါတို့ပါ ၀ င်သည်။ 15 W အပူအပူအထုပ်ကိုတိုက်ရိုက်ပေးသည်။
Minecraft ဆာဗာတစ်ခုကိုဖန်တီးခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်း - အဆင့်ဆင့်ညွှန်ကြားချက်များ
ယခုပရိသတ်များစွာသည် Minecraft server ကိုတပ်ဆင်ရန်အလွန်စိတ် ၀ င်စားကြသည်။ ဤတွင်ဤနေရာ၌အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အရေးအကြီးဆုံးပြproblemsနာများပေါ်ပေါက်လာသည်။
အဆိုပါ encoding ကများနှင့်ဒီကုဒ်ဒါကဘာလဲ? ဥပမာ။ encoding ကနှင့်ကိန်းဂဏန်းဒေတာကုဒ်ဖြုတ်, စာသားနှင့်ဂရပ်ဖစ်များအတွက်နည်းလမ်းများ
ဒေတာအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်အီလက်ထရောနစ်ကွန်ပျူတာများ၏စစ်ဆင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးစနစ်များကိုတိုးတက်အောင်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အရေးပါသောဇာတ်စင်ဖြစ်လာသည်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်းနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့နည်းလမ်းပုံမှန်အတိုင်းထံမှအတန်ငယ်ကွဲပြားခြားနားကြောင်း, ထို့ကြောင့်ပြောင်းလဲခြင်းလိုအပ်ပါတယ် ...
Asus X200MA - အသေးစိတ်သုံးသပ်ချက်
Asus က X200M ဟုခေါ်သောခေတ်သစ် Laptop ကိုစဉ်းစားပါ။ ဒီကိရိယာကိုတစ်ဦးသေးသေးလေးဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းအလွန်အလေးချိန်၌အလင်း။ စက်ပစ္စည်း၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများထုတ်လုပ်မှုမှတ်စုစာအုပ်အမျိုးအစားကိုမှစွပ်စွဲနိုင်ပါတယ်။ Asus က X200M တပ်ဆင်ထား ...
ရဲများကအပေါ်: မှာ "စန်း Andreas GTA" ကို codes တွေကိုတစ်အမျိုးမျိုး
ရဲများ၏ဂိမ်း၏ GTA စီးရီးကစားသမားအဆင်မပြေအများကြီးပေးသည်ဟု - ကဘာမှမပြောပါဘူး။ ရဲအမြဲခပ်သိမ်းသောလမ်းကိုထိန်းချုပ်ရန်, သူတို့အမိန့်ကိုစောင့်လျက်, သင်ပြုတစ်ချိန်က ...
အဆိုပါ Pirates ၏ဂိမ်းဘဏ္ဍာ: cheat, သိကောင်းစရာများနှင့်တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံ
တချို့ကဂိမ်းစီမံကိန်းများကိုလူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူများ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်ဖို့စတင်နေကြသည်။ ယခုအချိန်တွင်ဤ application များအတော်လေးအနည်းငယ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အတူစတင်ရန်အဘယ်အရာကိုဆုံးဖြတ်တစ်ခါတစ်ရံခက်ခဲ။ ယနေ့ကြှနျုပျတို့ဆှေးနှေးကွမညျ ...
ဂိမ်းကစားသူများစွာသည် Minecraft ရှိထောင်ချောက်များကိုနားလည်နိုင်ကြသည်။ သူတို့ကရရှိနိုင်ချက်ပြုတ်နည်းများအားလုံးရှာဖွေပေမယ့်မျိုးကိုဘာမျှမရှာပါ။ တကယ်တော့ဘာမှရှာမရနိုင်ပါ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ထောင်ချောက် ...
နှင့်ရုတ်တရက်လိုအပ်: တစ်လက်ပ်တော့ရန်သင့်မှတ်စုစာအုပ်ရဲ့ hard drive ကိုချိတ်ဆက်နှင့်သာကိုဘယ်လို ...
အလေ့အကျင့်တစ်ခုမှတ်စုစာအုပ်သို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ဘက်မြင်ကွင်းများ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုမှကွန်ပျူတာစက်ကိုတစ် hard drive ကိုချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေတားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုမြင့်မားတဲ့ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ကြောင်းပြသထားတယ်။ ရုတ်တရက်သို့မဟုတ်သဘာဝအလျောက်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုတစ်ဦးကထုံးတမ်းစဉ်လာ ...
Sims4မှပစ္စည်းများကိုဘယ်လိုလှည့်ရမလဲ။ Sims4မှအရာဝတ္ထုများကိုမည်သို့လည်ပတ်ရမည်နည်း။
Sims စီးရီး၏ဂိမ်းကဘာလဲဆိုတာမသိသောလူတစ်ယောက်ကိုယခုရှာတွေ့ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်သင့်အားအခြားသူတစ် ဦး ၏အခန်းကဏ္onကိုစမ်းသပ်ရန်၊ နေထိုင်ရန်အတွက်ခွင့်ပြုထားသောဘဝ Simulator တစ်ခုဖြစ်သည်။
Witcher 3: system ကိုလိုအပ်ချက်, ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ
CD ကိုစီမံကိန်းကနေထမ်းဘိုးအားလုံးကုမ္ပဏီများအားမရရှိနိုင်သောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှဂိမ်းကစားသူတို့တွင်အများကြီးယုံကြည်စိတ်ချရဖြစ်ကြသည်။ အခုတော့စတူဒီယိုအလုပ်၏နက်နဲသောပင်လယ်အတွင်းဇာတ်လမ်း၏နောက်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ကျော်အပြည့်အဝ၌တည်ရှိ၏ ...
Zombie Farm မှာစုဆောင်းမှုတစ်ခုကိုဘယ်မှာရှာရမလဲ။ ဖုတ်ကောင်လယ်ယာ: ကျောင်းစုဆောင်းခြင်း
မကြာသေးမီကလူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်အခြေပြုထားတဲ့ကွန်ပျူတာဂိမ်း၏ကြီးမြတ်လူကြိုက်များရရှိခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုသူတို့ client ကို downloads, မလိုအပ်ပါဘူးဆိုလိုသည်, အဘယ်မှာသင်နောက်ပိုင်းတွင်တတ်နိုင်သမျှလူမှုရေးကွန်ရက်ဧည့်ခံ ...
"Warface" တွင်ရှိ "Elimination" ၏ကျမ်းပိုဒ်: အကြံပေးချက်များ, လျှို့ဝှက်ချက်များ
multiplayer ကွန်ပျူတာဂိမ်းများသောအားဖြင့်တစ်ကွက်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, သူတို့ကအခြေခံအားဖြင့်, အဖွဲ့ကဝိညာဉျကိုအပေါ်ဆန့်ကျင်အတူမဟာမိတ်များနှင့်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ရပ်ရွာထဲတွင်လေထုညွှန်ကြားလျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ဤဂိမ်းအကြီးအကျယ်လျော်ကြေးပေးနေကြသည် ...
Rootkit သည် Rootkit ဖယ်ရှားရေးပရိုဂရမ်များဖြစ်သည်။ Kaspersky Anti-Virus
ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်များတိတ်တဆိတ်အလုပ်လုပ်တယ်နှင့်တစ်ခုလုံးကို system သို့မဟုတ်ပါကမဆိုအထူးသဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ထိခိုက်စေမယ့်အစီအစဉ်ကိုခေါ်တော်မူနိုင်ပါသည်။ ဤပြဿနာကိုကြုံတွေ့ရတိုင်းစက္ကန့်ပရိုဂရမ်မာ။ လက်ဝဲဘက်အဘယ်သူမျှမရှိတယ် ...
ပထမတော့ "သိပ္ပံပညာ၏ဝဘ်" ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအသုံးပြုသူအလွန်ခက်ခဲသည် novice ရန်ရှိသည်။ သို့သော်ဤမျှလောက်အသစ်အ ... ပုံမှန်အားဖြင့်, ထိုလူသစ်ဟာ operating system ကို web browser ကိုက Internet Explorer သို့ပေါင်းစည်းအသုံးပြုသည်။ ခဏ မှစ. ...
Minecraft ရှိထပ်မံပြောဆိုသူများ - ဖန်တီးခြင်းနှင့်အသုံးချခြင်း
လေ့လာသူများသည်ဤအချက်ကိုသတိမပြုမိကြသော်လည်း Minecraft တွင်အမျိုးမျိုးသောယန္တရားများစွာရှိပြီးတစ်ခုချင်းစီတွင်ထူးခြား။ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်။ ထို့အပြင်ယန္တရားများစွာကိုအသုံးပြုကြသည်မဟုတ် ...
"အော်ပရာ" တွင်အဖြစ်စတင်စာမျက်နှာကိုပြောင်းလဲရန်။ homepage "အော်ပရာ"
browser ကိုတစ်အသုံးပြုသူစတင်စာမျက်နှာကိုမြင်ပထမဦးဆုံးအရာကိုဖွင့်။ သူမရဲ့လိပ်စာ setting တွင်သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ဦးချင်းစီအစီအစဉ်တွင်အဆိုပါ Web ကို browse ဖို့ဒီဇိုင်း, ထိုကဲ့သို့သော function ကိုလည်းမရှိ။ ဒါဟာအသုံးပြုသူအဆင်ပြေဘို့အဓိကအားထောက်ပံ့ပေးသည်။ ...
တစ်ဦး ICQ-အရေအတွက်ကိုကဘာလဲ: မှတ်ပုံတင်ထံမှဆက်သွယ်ရေးမှ
ယနေ့ခေတ်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များကိုအလွန်လျင်မြန်စွာတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲ - ကဥပမာ, ဝယ်လိုအားအတွက်တစ်နှစ်ဖြစ်လိမ့်မည်အင်တာနက်ပေါ်ရှိဆက်သွယ်ရေး tool ကိုဘယ်လိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်ခက်ခဲပါတယ်။ အလားတူတစ်ခုခု ICQ နှင့်အတူဖြစ်ပျက် - တစ်ချိန်က ...
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,726 စက္ကန့်ကျော် Generate ။